TOR usoro emebi
S Type emebi
V Type emebi
H Type emebi
KB usoro emebi
· S Type emebi
· V Type emebi
· H Type emebi
Kedu otu esi echebe onye na-egwupụta ihe mgbe ị na-eji ihe mgbochi ahụ zere imebi ihe ahụ?
Post oge: 05-11-2020
1. Oke mmanụ mmanụ na mmetọ Ebe ọ bụ na mmetọ mmanụ bụ otu n'ime isi ihe kpatara mgbapụta mmiri, ọ dị mkpa iji gosipụta ọnọdụ mmetọ nke mmanụ hydraulic n'oge. (Gbanwee mmanụ hydraulic na 600 awa na ntinye ihe na 100 awa). Enweghị mmanụ haịdrọlik ga c ...GỤKWUO »
Otu esi edozi nsogbu mmanụ ojii na ndị na-emebi mmiri
Post oge: 03-12-2019
Hydraulic breaker abụrụla ihe ọrụ dị mkpa maka ndị na-egwupụta hydraulic. Fọdụ ndị na-etinyekwa ndị na-emebi mmiri nke hydraulic na ndị na-ebu azụ azụ (nke a makwaara dị ka ndị na-arụsi ọrụ ike na nsọtụ abụọ) ma ọ bụ ndị na-ebu wiil maka ọrụ ndozi. Mgbe ị na-eji ihe nkedo hydraulic na excavator, ị ga-ahụ na hydraulic ...GỤKWUO »
Ihe izere mgbe ị na-eji haịdrọlik hama:
Post oge: 07-25-2018
N'iji haịdrọlik arụ ọtụtụ ihe ga-emetụta arụmọrụ ya nke ọma, ọbụnakwa kpatara mmebi ụfọdụ, ọ bụrụ na anyị kwesịrị izere ọrụ ahụ, iji chebe haịdrọlik dị mma? 1. Zere ịrụ ọrụ na steeti ịgbagharị na-aga n'ihu Lelee ma nrụgide dị elu ...GỤKWUO »
Ihe edeturu maka nchekwa nke haịdrọlik ndinuak hama:
Post oge: 01-14-2018
A na-eji hamerụ ihe na-akụda hydraulic n'ọtụtụ ebe na ndụ anyị ma ọ bụ ngwaọrụ dị mkpa maka hydca excavator.Mgbe anyị na-eche banyere haịdrọlik haịmerụ, anyị na-eche maka ngwa ọrụ ọ na-eji n'ọrụ ya, nke anyị na-ahụkarị mgbe a na-arụ ụzọ. tumadi na-eji na injinịa c ...GỤKWUO »
Ihe na-akpata haịdrọlik na-akụpịa hama ugboro ole na ole mperi:
Post oge: 03-23-2017
Dịka ngwa dị oke mkpa maka ndị na-egwupụta ihe, igwe na-akụpịa ha nwere ike iwepụ ihe na-ese n'elu mmiri na ala nke ọma na mgbape okwute. Fọdụ ọrụ nwere kọrọ na iku ugboro ga-abụ na-ezighị ezi iji. Kedu ihe kpatara nke a? Isi ihe kpatara ọnọdụ a bụ na mkpọpu ala ...GỤKWUO »
Ekwentị: +86 535 6433353
Faksị: +86 535 6433353
Ekwentị: +86 18601660817
Okwu: No.183 Fenghuangshan Road, Fushan District, Yantai, Shandong, China
Pulverizer N'ihi Excavator, Mkpọrọ Mkpọrọ Mkpọrọ, Shiee N'ihi Excavator, Crusher N'ihi Excavator, Hb Series emebi, Control valvụ N'ihi emebi,